माओवादीको विवाद केन्द्रीय कमिटीमा | गृहपृष्ठ
Home समाचार माओवादीको विवाद केन्द्रीय कमिटीमा
माओवादीको विवाद केन्द्रीय कमिटीमा
माघ ५, काठमाडौं (अस) । एनेकपा माओवादीमा पछिल्लो समयमा बढेको विवाद मिलाउन बिहीवार केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने भएको छ । बुधवार बसेको पोलिटब्युरोको बैठक सबै विवाद केन्द्रीय कमिटीमा लगिने भनेर एक घण्टामा नै स्थगित गरिएको पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्कीले बताए । सोमवार आन्तरिक पार्टी प्रशिक्षणमा उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई बोल्न नदिएपछि पार्टीभित्र विवाद बढेको थियो । प्रशिक्षणमा डा. भट्टराईले आफ्नो ८ पृष्ठ लामो फरक मत राख्न दिनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, संस्थापन पक्षका नेताहरूले फरक मत सबै नपढी ‘यसमा उपाध्यक्ष भट्टर्राईको फरक मत छ’ मात्र भन्ने भनिएपछि विवाद बढेको थियो । उनलाई बैठकमा फरक मत छ भन्नेबाहेक अरू कुरा भन्न नदिने भएपछि भट्टराई र भट्टराई पक्षका नेताहरूले प्रशिक्षण कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेका थिए । भट्टराई पक्षका नेताहरू निस्के पनि हिसिला यमि भने बैठकमा अन्तिम समयसम्ममा बसिन् । यमिले बाबुरामजीलाई किन बोल्न नदिएको भन्ने आवाज उठाएपछि माइकको लाइन बन्द गरिएको थियो ।
रावद्वारा कोइराला र खनालसँग भेटघाट
माघ ५, काठमाडौं (अस) । भारतीय विदेश सचिव अनुपमा रावले बुधवार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गरेकी छन् । बुधवार बिहान सभापति कोइरालालाई भेट्न राव कोइरालानिवास, महाराजगञ्ज पुगेकी थिइन् । भेटमा समसामयिक राजनीतिका विषयमा कुराकानी भएको सभापति कोइरालाका सहयोगी लक्ष्मण ढकालले बताए । ढकालका अनुसार रावले अनमिन गएपछिको अवस्थाका विषयमा पनि चासो राखेकी थिइन् । राजनीतिक निकासका लागि दलहरू मिलेर जान उनले सुझाव दिएको पनि बताइएको छ ।
रावले बुधवार अपराह्न नै एमालेका अध्यक्ष खनालसँग पनि भेट गरी सभापति कोइरालासँग भएका विषय नै दोहोर्‍याएकी थिइन् । खनालका सहयोगी रामबाबु अधिकारीका अनुसार रावले खनालसँग शान्ति-प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनका लागि सहमतिको आधारमा अघि बढ्न सल्लाह दिएकी थिइन् ।
ठूला दल संविधानसभा असफल बनाउन लागे
माघ ५, काठमाडौं (अस) । मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ठूला तीन दल संविधानसभालाई असफल बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । बुधवार लहानमा मधेश आन्दोलनको चौथो वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले उक्त आरोप लगाएका हुन् । उनले भने, ‘संविधानसभालाई नै विफल बनाउन दलहरू लागेका छन् । त्यसका लागि तराईवासीहरू सचेत रहन जरुरी छ ।’ उनले मधेश आन्दोलन गरेर भए पनि स्वायत्त मधेश स्थापना गरिछाड्ने बताए । उनले भने, ‘एमाओवादीले चाहेजस्तो तानाशाही संविधान पनि बन्दैन । नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घीयताको विरोधमा छ । एमाले स्वायत्त मधेश भएको हेर्न चाहँदैन । त्यसैले संविधान बन्न नदिने सम्भावना बढेको छ ।’ रासस